तपाईलाई थाहा छ मह खानुका यी फाइदा ?
काठमाडौं । मह प्राय: सबैलाई मनपर्छ । मह जति मीठो छ स्वास्थ्यको लागि पनि त्यति नै फाइदाजनक छ । मह धार्मिक दृष्टिले पनि पवित्र तथा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसलाई स्वस्थवर्द्धक खानेकुराको रुपमा पनि लिइन्छ । महको महत्व अधिक भएकै कारण पनि मौरीपालन व्यवसाय बढ्दै गएको छ ।
महमा विभिन्न जडीबुटीको मिश्रण हुन्छ जसमा औषध‍िको गुणसमेत हुन्छ । परापूर्व कालदेखि नै मानिसहरुले महलाई खान मात्र नभई स्वास्थ्य उपचारमा पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
अहिले भने महले क्यान्सर मुटु रोग ठिक गर्ने, अल्सरको सम्भावना कम गर्ने, पाचन प्रक्रियालाई सजिलो बनाउने, रगतमा चिनीको मात्रा नियमन गर्ने, खोकी निको पार्ने, शारीरिक तन्दुरुस्ती बढाउने आदि कार्यमा निकै ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ । यस्ता कतिपय कुराहरु वैज्ञानिक रुपमा समेत प्रमाणित भइसकेका छन् । केही वैज्ञानिक रुपमा समेत प्रमाणित भएका महका फाइदा यस्ता छन् ।
१. एन्टी व्याक्टेरियल प्रोपर्टी
महले किटाणुहरुलाई मार्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन । अनुसन्धानकर्ताहरु महको प्रयोग इकोलाई, साल्मोनेला आदि किटाणुविरुद्ध निकै प्रभावकारी रहने बताउँछन् ।
न्युजिल्याण्डमा पाइने ‘मनुका’ नामक मह र मलेसियामा पाइने ‘तुअलांग’ नामक मह पेप्टिक अल्सर गराउने किटाणु ‘एच पाइरोली’ को विरुद्ध लड्न निकै फाइदाजनक हुने बताइएको छ । महमा हुने हाइट्रोजन पेरोक्साएड र यसको यसिडिक प्रकृतिले गर्दा किटाणुविरुद्ध लडन सक्ने बनाउँछ ।
त्यसैले पनि महलाई घाउ निको पार्न प्रयोग गरिन्छ भने अल्सर, जलेको छाला, बिबिरा आदिलाई ठिक गर्न पनि निकै प्रभावकारी मानिन्छ ।
२. घाँटीको उपचार
हालै १ सय ३९ जना बच्चाहरुमा गरिएको अध्ययन अनुसार रातिमा खोकी लाग्ने समस्या अहिले प्रयोगमा आएका औषधिहरुले भन्दा चाँडो महले ठिक पार्ने देखियो ।
त्यस्तै इटालीमा गरिएको अर्को अध्ययनले खोकी मात्रै नभई स्वासप्रस्वास प्रक्रियामा समेत मह लाभदायी भएको पाइयो । तर, एक वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरुलाई महको सेवन गर्न दिनु हुँदैन । किनभने ती बच्चाहरुमा महमा हुनसक्ने अन्य विकारहरुलाई पचाउन सक्ने पाचन प्रक्रिया विकसित भइसकेको हुँदैन ।
३. शारीरिक तन्दुरुस्ती
खेलाडीहरुलाई खेलको क्रममा के खाँदा बढी शक्ति र स्टामिना प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । यसै क्रममा युनिभर्सिटी अफ मेम्फिसमा गरिएको एक अध्ययनमा खेलाडी तथा शारीरिक क्रियाकलापमा लाग्ने व्यक्तिहरुमा महको सेवन ग्लुकोजको सेवनभन्दा बढी फाइदाजनक रहने पाइएको छ ।
तसर्थ यदि हामी नियमित जीम तथा व्यायममा सक्रिय हन्छौँ भने महको सेवन गर्न भुल्नुहुँदैन ।
४. क्यान्सर, मुटुरोग र मधुमेह
मधुमेह भएको मुसामा गरिएको एक अध्ययनले महको सेवनले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा प्रवाह गराउन मद्धत गरेको पाइएको छ । तर, विशेषज्ञहरु भने मानिसमा यो अध्ययनको नतिजा पूरा नआइसकेको जनाउँदै महको सेवन नगर्न बताउँदै आएका छन् ।
यसैगरी ल्यावमा गरिएको अध्ययनमा क्यान्सर र मुटुरोगको लागि पनि मह प्रभावकारी रहने भेटिएको भएपनि यसलाई मानिसमा परीक्षण गर्न बाँकी नै छ ।